မျက်နှာအဆီနှင့် အရေးကြောင်း ကင်းစင်စေမည့် မျက်နှာယောဂကျင့်စဉ် – Healthy Life Journal
မျက်နှာအဆီနှင့် အရေးကြောင်း ကင်းစင်စေမည့် မျက်နှာယောဂကျင့်စဉ်
Posted on ဇူလိုငျ 31, 2020
———၊ လရိပ်မေ ၊———
မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေရင်၊ ပါးဖောင်းလွန်းနေရင်၊ မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် အရေးကြောင်းဖြစ်နေရင် မျက်နှာယောဂကျင့်စဉ် ကျင့်ပေးတာကြောင့် နာကျင်မှုမရှိဘဲ သဘာဝကျကျ ငယ်ရွယ်နုပျို ကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။ အောက်ပါ ယောဂကျင့်စဉ်အဆင့် ၉ ဆင့်က မျက်နှာသွယ်လျ ချောမွေ့ပြီး အရေးကြောင်းကင်းစင်စေမှာဖြစ်လို့ နေ့တိုင်းလုပ်ပေးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
(၁) မေးရိုးပုံသွင်းသည့် ကျင့်စဉ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
မေးရိုးတလျှောက်မှာ မေးစေ့နှစ်ဖက်ပေါ် လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်တင်ထားပါ။ ဦးခေါင်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထားပြီး မေးစေ့ကို အပေါ်သို့အနည်းငယ် တွန်းထုတ်ကာ လည်ပင်းကြွက်သားတွေပေါ် ခုခံအားရှိအောင် ဖန်တီးပေးပါ။ နှစ်စက္ကန့်လောက်ကြာမှ ပြန်ဖြေလျှော့လိုက်ပါ။ ၁၀-၁၅ ကြိမ် ပြန်လုပ်ပါ။
(၂) သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေသည့် ကျင့်စဉ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
နဖူးပေါ်မှာ လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်တင်ပြီး မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထားပါ။ နဖူးဘေးအရေပြားကို ဘေးဘက်ဆီသို့ အနည်းငယ် ဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါ။ လျှာကို ထုတ်နိုင်သမျှ ထုတ်ပေးပါ။ဖြည်းဖြည်းချင်း အသက်ရှူပြီး နှာခေါင်းကနေ လေ၀အောင် ရှူသွင်းကာ ပါးစပ်ကနေ လေပြန်ထုတ်ပေးပါ။ ၃၀ စက္ကန့်ကြာအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
(၃) ပါးပြင်သန်စွမ်းစေသည့် ကျင့်စဉ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ပါးစပ်ပေါ်မှာ ညာဘက်လက်က လက်ချောင်းသုံးချောင်း တင်ပါ။ ဘယ်ဘက်ပါးပြင်ပေါ်မှာ ဘယ်ဘက်လက်ဖ၀ါး တင်ပါ။ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းပြီး ပါးစပ်ပိတ်ထားတုန်းမှာ လေမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ဘယ်ဘက်ပါးကို လက်နဲ့ ညင်ညင်သာသာ ဖိလိုက်ပါ။ နှစ်စက္ကန့်အကြာမှာ ဖြေလျှော့လိုက်ပါ။ ပါးပြင်တစ်ဖက်ကို ၁၀-၁၂ ကြိမ် လုပ်ပေးပါ။
(၄) မျက်ဝန်းကြွက်သား ပြေလျော့ကျင့်စဉ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
မျက်လုံးအထက်နဲ့ အောက်မှာ လက်ချောင်းလေးတွေတင်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဗီပုံစံ လုပ်ပေးပါ။ မျက်ဝန်းတ၀ိုက် အရေပြားကို ညင်ညင်သာသာ ဆွဲဆန့်ပြီး မျက်ခုံးတွေကို ပင့်လိုက်၊ လက်ချောင်းအောက်က ပါးရိုးတွေကို လျှော့ချလိုက် လုပ်ပေးပါ။ စက္ကန့် ၃၀ ကြာ လုပ်ပေးပါ။ ၁၀-၁၅ ကြိမ် ပြန်လုပ်ပါ။
(၅) နှာခေါင်းကျင့်စဉ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လက်သီးဆုပ်လေး နှစ်ခုလုပ်ပြီး အပေါ်နှုတ်ခမ်းအထက်မှာ ထားပေးပါ။ နှာခေါင်းအောက် အရေပြားကို ညင်ညင်သာသာ ဆွဲဆန့်ပါ။ စက္ကန့် ၃၀ ကြာလုပ်ဆောင်ပါ။
(၆) ပါးစပ်တ၀ိုက် အရေးကြောင်းကင်းစေမည့် ကျင့်စဉ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပါးပြင်ပေါ်မှာ လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို တင်ထားပါ။ ပါးစပ်ဖွင့်ပြီး လျှာထိပ်ကို အာခေါင်မှာ ကပ်ထားပါ။ နှာခေါင်းတ၀ိုက် အရေပြားကို ညင်ညင်သာသာ ဆွဲဆန့်လုပ်ပြီး လျှာကို အာခေါင်ဆီ တွန်းထုတ်ပေးပါ။ စက္ကန့် ၃၀ ကြာ လုပ်ဆောင်ပါ။
(၇) မေးရိုးတင်းရင်းစေမည့် ကျင့်စဉ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို ပါးရိုးပေါ်တင်ပါ။ ပါးစပ်ကို အနည်းငယ်ဟပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းကို သွားတွေဆီ အတွင်းထဲကွေးပါ။ အောက်နှုတ်ခမ်းအနေအထား မပြောင်းဘဲ ပြုံးနိုင်သလောက် ပြုံးပါ။ မေးရိုးအကြောပြေတဲ့အထိ အောက်နှုတ်ခမ်းကို အတွင်းထဲ ကွေးထားပါ။ စက္ကန့် ၃၀ ကြာ လုပ်ဆောင်ပါ။
(၈) နဖူးအရေးကြောင်းကင်းစေမည့် ကျင့်စဉ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
သင့်လက်ဖ၀ါးတွေကို နဖူးပေါ်တင်ထားပါ။ လက်တွေကို ဦးရေပြားဆီ ညင်ညင်သာသာ တွန်းပေးပါ။ နဖူးနဲ့ မျက်ဝန်းအောက် အရေပြားတွေ အကြောပြေလျော့တယ်လို့ ခံစားရတဲ့အထိ လုပ်ပေးပါ။ စက္ကန့် ၂၀-၃၀ ကြာ လုပ်ဆောင်ပါ။
(၉) မျက်ခွံတွဲကျမှု ကာကွယ်သည့် ကျင့်စဉ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
မျက်ခုံးပေါ်မှာ လက်ချောင်း(အလယ်) သုံးချောင်းထိပ်တင်ပြီး မျက်လုံးကို မှိတ်ထားပါ။ မျက်ခွံအထက် အရေပြားနေရာ ပြေလျော့တယ်လို့ ခံစားရတဲ့အထိ မျက်ခုံးကို တွန်းထုတ်ပါ။
စက္ကန့် ၂၀-၃၀ ကြာလုပ်ဆောင်ပါ။
•	မလုပ်ခင် မျက်နှာနဲ့ လက်ကို ကောင်းကောင်း ဆေးပေးပါ။ အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်လိမ်းရင် ပိုချောမွေ့စေပါတယ်။
•	မနက်ခင်းမှာ ယောဂကျင့်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ကြွက်သားတွေကို တင်းရင်းစေကာ မျက်နှာဖောင်းအစ်မှု လျော့ကျစေပါတယ်။
Related Items:beauty tips, Face Skin, Yoga
ကြက်သွန်နီရှိရုံနဲ့ ဆံပင်နဲ့ အသားအရေ လှပစေရမယ် . . .
အာလူးရှိရုံနဲ့ အလှအပပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းကြမယ် . ..
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ အသားအရေကို ပန်းသီးနဲ့ ပေါင်းတင်ရအောင်
နို့သီးခေါင်း သဘာဝအတိုင်း ပန်းနုရောင်သမ်းလာစေမည့် နည်းများ
ဆီးချိုရောဂါ စစ်ဆေးရာမှာ . . .
Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု အောင်မြင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရုရှားတက္ကသိုလ်ကြေညာ
ဆီးအရောင် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပြောင်းလဲနေလျှင်
ဘာကြောင့် ကြို့ထိုးရတာလဲ …
လူတိုင်းသိသင့်သည့် မျက်စိစောင့်ရှောက်ရေး အခြေခံအချက်များ
Featured healthy Nutrition weird News Skin Care Beauty Diabetes Food Pregnancy kid Female mental care Eye Care Cancer Healthy Life Physical Exercises Lessons healthy eating Knowledge Foods Celebrities Experience Male Weight Loss Dental Care Myanmar Health Stress fun laughter Family Healthy Habit Sleep Baby Vegetables Lesson Hypertension Mental Health Home Remedies Kidney